Baahin: Isniin, Jul 18, Weriye Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. Khaliif Ciise Mudan oo loo magacaabay wasiirka amniga ee Puntland; Gen. Yusuf A. Khayr oo loo magacaabay wasiiru-dawle sharci; Mudanayaasha baarlamaanka Puntland oo aqbalay xisaab-xirkii 2010 & miisaaniiyada dawlada ee 2011; Dakhaatiir anaajib ah oo hawlo caafimaad ka fulin doona gobollada Puntland; Dr. Warsame, wasiirka caafimaadka ayaan ka waraysnay; Axmed Karaash oo sheegay in gobollada Sool, Sanaag & Cayn aanay xilligan cidina ka talin, ayna ka jirto xaalad bini-aadanimo oo aad u qallafsan. – Radio Daljir
Baahin: Isniin, Jul 18, Weriye Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. Khaliif Ciise Mudan oo loo magacaabay wasiirka amniga ee Puntland; Gen. Yusuf A. Khayr oo loo magacaabay wasiiru-dawle sharci; Mudanayaasha baarlamaanka Puntland oo aqbalay xisaab-xirkii 2010 & miisaaniiyada dawlada ee 2011; Dakhaatiir anaajib ah oo hawlo caafimaad ka fulin doona gobollada Puntland; Dr. Warsame, wasiirka caafimaadka ayaan ka waraysnay; Axmed Karaash oo sheegay in gobollada Sool, Sanaag & Cayn aanay xilligan cidina ka talin, ayna ka jirto xaalad bini-aadanimo oo aad u qallafsan.
Luulyo 18, 2011 12:00 b 0
“Sool, Sanaag & Cayn ma jiro maamul si toos ah uga shaqeeya, dadka halkaasi degganna allaa u maqan? Axmed Karaash..
Muran ka taagan magacaabista golaha wasiirrada federaalka.